Ahoana ny fanamboarana ny tolo-kevitry ny trano fisakafoanana sy ny fomba fahandro ao amin'ny Google Assistant | Androidsis
Ahoana ny fomba fanamboarana ny tolo-kevitry ny trano fisakafoanana sy ny fomba fahandro ao amin'ny Google Assistant
Ny mpanampy an'i Google dia fitaovana efa nilaina hatry ny ela raha mitady trano fisakafoanana isika ary miaraka amin'izay karazan-tsakafo manokana. Ny iray amin'ireo endrika vaovao ananan'ny Mpanampy dia ireo fampahatsiahivana sy tolo-kevitra vaovao, noho izany dia mila dingana mandroso rehefa mitady toerana ao an-tanànanao.
Raha te-hanadio ireo tolo-kevitra ianao dia tsy maintsy holazainao amin'ilay fampiharana ilay zavatra tianaoRaha tia paty sy pizza ianao dia mendrika ny manondro azy io ary hitady ny toerana tsara indrindra afaka segondra vitsy. Ho an'ity, amin'ny safidinao dia afaka misafidy karazana sakafo isan-karazany izay fihinanao matetika ianao.
1 Ahoana ny fomba hisafidianana ny safidinao amin'ny sakafo ao amin'ny Google Assistant
2 Mitadia trano fisakafoanana izao
Ahoana ny fomba hisafidianana ny safidinao amin'ny sakafo ao amin'ny Google Assistant
Ho an'ity dia mila mahita ny mpanampy Google amin'ny fitaovantsika izahay, mora be izany, kitiho ny bokotra fanombohana, azonao atao koa izany sintomy ny fampiharana Google Assistant avy amin'ny Play Store hanana fidirana mivantana. Safidy iray hafa ny manamboatra ny feontsika hampiasana azy amin'ny làlana manaraka: Google> Fikirana> Feo> Fanekena ny feo> "Ok, Google"
Sokafy ny Google Assistant, kitiho ny "Browse", avy eo tsindrio ny kaonty ny kaontinao ary fidio farany amin'ny «Fikirana» hisafidianana ireo safidinao sakafo. Ao amin'ny takelaka "Ianao", dia ho hitanao ny "Sakafom-pisakafoanana", eto dia safidio ireo sakafo tianao, ny zava-drehetra ho azon'ny Mpanampy mifampiresaka rehefa mitady trano fisakafoanana ianao.
Ao amin'ny "preferences sakafo" dia afaka misafidy ireo karazan-tsakafo ianao, na aziatika, italianina, Espaniôla, meksikana na karazan-tsakafo hafa. Azonao atao koa ny manasongadina ireo akora tianao kokoa noho ny hafa, mety mahasoa tokoa izy io, ary koa ny vegan sy ny celiac dia hamely haingana ireo toerana mety hohanina.
Mitadia trano fisakafoanana izao
Vantany vao nifidy ireo karazan-tsakafo sy akora ianao rehefa mitady toerana Google Assistant mihitsy no ho haingana be ary manokana rehefa manoro ny trano fisakafoanana sy bara. Betsaka ny sosokevitra, ka miankina aminao sy ny olona miaraka aminao ny fanitsiana ny tsirairay amin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba fanamboarana ny tolo-kevitry ny trano fisakafoanana sy ny fomba fahandro ao amin'ny Google Assistant
Efa misy emulator Nintendo Switch ho an'ny Android sy fampiasa. Na dia manana fandrika aza izy